Halyeey kooxda Manchester United ah oo talo siiyey Marcus Rashford - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
By admin January 11, 2022 13
(Manchester) 11 Jan 2022. Halyeeyga Manchester United ee Louis Saha ayaa talo siiyay xiddiga kooxda Marcus Rashford, kaasoo aan haatan ku jirin waqtigiisii ​​ugu fiicnaa ee Red Devils.
Xilli ciyaareedkan, Marcus Rashford ayaa wuxuu u ciyaaray kooxda Manchester United 15 kulan oo tartamada oo dhan ah, wuxuu u dhaliyay 3 gool, wuxuuna caawiyay gool, jamaahiirta wax badan ayay ka sugayaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Wargeyska Daily Mail ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeeyga Manchester United ee Louis Saha, waxaana ka mid ahaa:
“Rashford jir ahaan wuu soo kabsaday, laakiin waxay u muuqataa inuu u baahan yahay daqiiqado badan, waxaan u maleynayaa inuu u baahan yahay inuu xoogaa nasto.”
“Xaaladda oo dhan way is beddeshay, tababaraha ayaa isbeddelay, dhinaca taatikada iyo kalsoonida qof kasta ayaa sidoo kale isbeddelay.”
Louis Saha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri: “Laakiin Marcus Rashford waa mid ka mid ah xiddigaha leh awood badan.”
Manchester United ayaa hadda ku jirta kaalinta toddobaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxayna leedahay 31 dhibcood, 22 dhibcood ayeey ka hooseysaa kooxda hoggaanka haysa ee Manchester City, oo heysata 53 dhibcood.
Jamaahiirta kooxda ayaa waxay rajeynayaan in Marcus Rashford iyo saaxiibadiis kale inay wanaajiyaan booska kooxda ee xilli ciyaareedkan, sidoo kalena ay si xoogan ugu dagaalamaan hanashada Champions League.
Man City, AC Milan, Juventus & Guud ahaan kulammada laga ciyaari doono caawa horyaallada waa weyn ee Yurub
Horudhac: Arsenal vs Southampton… (Rikoorka ay Gunners ka heysato Saints oo gaari kara mid ay ka heysatay Man City)